Wararka - Ha fahmin calaamadaha lagu dhaqo, dharka la dhaqdo ayaa noqda dhar burbursan
Ha fahmin calaamadaha lagu dhaqo, dharka la dhaqdo ayaa noqda dhar burbursan
Waxay ka soo muuqdeen calaamadaha dharka muddo afartan sano ah, mid kasta oo ay doorteen khubaro caalami ah fudeyd iyo hufnaan.
Hase yeeshe dadka badankood, tilmaamaha maydhashada ayaa sidoo kale lagu qori karaa Martian.
Sida laga soo xigtay ra'yiururin cusub, 10-kii qofba sagaal ayaan awoodin inay kala gartaan astaamaha caanka ah ee loo isticmaalo calaamadaha dharka. Xitaa kuwa soo qabtay farqiga u dhexeeya dhogorta iyo waxyaalaha la isku qurxiyo ayaa qiraya inay ku wareersan yihiin qowmiyadaha wareersan ee sanduuqyada, wareegyada iyo iskutallaabyada loo adeegsado inay ka bixiyaan talo ku saabsan qalajinta iyo xoqidda.
Natiijooyinka waxaa laga helay ra'yi ururin ay sameeyeen 2,000 oo qof oo ay adiga u sameysay 'YouGov' Morphy Richards. Saddex meelood meel dadka la wareystay waxay yiraahdeen ma aysan aqoonsan midkoodna lixda astaamood ee la muujiyey, halka astaanta kaliya ee ay aqoonsan yihiin in ka badan kala badh dadka ay tahay birta oo leh hal dhibic. Qiyaastii boqolkiiba 70 way ogaayeen in loola jeedo "birta kuleylka yar". Kaliya boqolkiiba 10 calaamaddu waxay ogaayeen calaamadaha "ha qallajin nadiif", halka boqolkiiba 12 keliya ay yaqaanaan "faleebo qallalan oo keliya".
In kasta oo kacaankii galmada ahaa, haweenku weli way ka aqoon badan yihiin ragga. Wacyigelintu waxay ahayd midda ugu sareysa dumarka jira 18 illaa 29-sano jir - kuwa daryeela dharka ayaa si cad muhiim ugu ah.
Chris Lever, oo ka socday Morphy Richards, ayaa yiri: “Astaamaha daryeelka dharka waa luuqad gaar ah, oo si cad u ah luuqad dad aad u yar oo ku nool UK ay waqti u qaateen in ay bartaan. “
"Barashada aasaasiga sida astaanta astaanta ah ee qalalan iyo midda metesha dhaqitaanka caadiga ah waxay wax weyn u tareysaa sida ugu wanaagsan ee dharka looga helo."
Golaha Wadatashiga Guryaha ee La-tashiga ayaa sheegay in aysan layaabin markay ogaadeen in dadku aysan aqoon u lahayn iyaga.
“Waa wax laga xumaado in aqoonsi la’aani jirto, laakiin waa sheeko soo noqnoqotay,” ayuu yiri afhayeen Adam Mansell. "Waxaan nahay urur yar mana haysanno miisaaniyad weyn."
Qolka 508, Dhismaha 2, HaoYaHao E-Commerce Industrial Park, Dongsheng Road No.555, Degmada QingShanHu, NanChang City 330012, Gobolka Jiang Xi, Shiinaha
Bilaabista deenishku waxay ikhtiraacdaa nigiska dharka ...
Immisa ka mid ah astaamahan dharka lagu maydho ayaad ...
Ha fahmin calaamadaha dhaqitaanka, dhaq ...